Arsenal Oo Warbixin Ka Bixisay Dhaawaca 11 Cayaaryahan Iyadoo Alex Lacazette Uu Soo Laabanayo Halka Martin Odegaard Loo Fasaxay Inuu Cayaaro – Garsoore Sports
Arsenal Oo Warbixin…
Arsenal ayaa war cusub ka bixisay dhaawaca 11 ciyaartoy kahor kulanka Carabao Cup ee ay Arbacada la yeelan doonaan West Brom.
Weeraryahanka reer France Alexandre Lacazette, oo seegay labadii kulan ee furitaanka xilli ciyaareedka Premier League ee Brentford iyo Chelsea, ayaa soo laabanaya kaddib markii uu ka soo kabsaday Covid-19.
Dhanka kale, Martin Odegaard ayaa loo fasaxay inuu safto kulankiisii ugu horreeyay kaddib markii uu helay ogolaansho buuxda oo caalami ah kaddib markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda reer Spain ee Real Madrid dabayaaqadii toddobaadkii hore.
Kooxda ayaa sidoo kale xaqiijisay in dambeedka middig Hector Bellerin (bowdada cidhiidhi ah) iyo Alex Runarsson (Covid-19) ay ku soo laabteen tababarka buuxa kaddib markii labaduba ay seegeen guuldarradii 2-0 ee ka soo gaartay Chelsea axaddii.
Kieran Tierney (muruqa bowdada) iyo Gabriel Martinelli (muruqa lugta hoose), oo labaduba kasoo muuqday kulankii Chelsea, ayaa soo kabsaday waxayna kusoo laabanayaan tababarka kooxda inteeda kale.
Arsenal ayay u badan tahay inay ka maqnaan doonto saxiixa Ben White iyo garabka Willian kulanka West Brom kaddib markii labadooduba laga helay Covid-19.
Xiddiga reer Brazil ayaa haatan ka fikiraya inuu ku laabto kooxda reer Brazil ee Cortinhians kaddib markii uu boos ka waayay Emirates.
Metro ayaa sheegeysa in 33-jirkan uu doorbidayo inuu u dhaqaaqo koox ka dhisan qaaradda Yurub, laakiin uusan meesha ka saarin inuu ku laabto Brazil haddii aysan jirin dalabyo kale. Willian aabihiis ayaa warbaahinta Brazil u sheegay xalay in tallaabadani ay tahay ‘mid adag, laakiin aan macquul ahayn.’